Esinye sezifo ezidluliselwa ezivamile ngocansi kuyinto zangasese herpes, izimpawu ezingesiyo manifest njalo. Yingakho lesi sifo ngenkuthalo esakaza phakathi kwabantu.
Sibangelwa HSV 1, okuyinto namanje kuphakamisa izilonda, noma sikashukela sohlobo 2. It is adluliselwa ngokuyinhloko ngomlomo, anal kanye ocansini lwesitho sangasese sowesifazane. Nokho, hhayi ngaphandle futhi ukudluliswa contact.
Futhi ukutheleleka kungenzeka umbungu by umama phakathi nenkathi yokukhulelwa nokubeletha. Lokhu kungaholela pathologies sina, ngisho nokufa. Izinkinga yokuzala basongela inkinga lesi sifo.
Ukwanda lezifo ezithathelwana ngobulili futhi ekukhuleni kwayo njalo ngenxa yokuthi izimpawu samabhamuza ezithweni zangasese ngokuvamile bengekho. Man, engazi ukuthi atheleleke, ke edlulisela igciwane abalingani. Ngaphezu kwalokho, kukhona uhlobo atypical lesi sifo, lapho sibuthakathaka kakhulu, noma izimpawu engavamile kuye.
Ngokwesibonelo, ukuvuvukala ezingamahlalakhona kungabangela ncamashi zangasese herpes, izimpawu okuyinto kuleli cala kuzohluka kusukela abavamile. Ngezinye izikhathi lesi sifo yabonisa ububomvu kuphela okuncane, ukulunywa, ukuvuvukala, imifantu.
Futhi, ukuqubuka zingavela ngaphakathi esithweni sowesifazane futhi wesibeletho. Kulokhu, owesifazane bangase bangaqapheli ukuthi atheleleke. Ngokuvamile kuhilela urethra kanye ingemuva, okuyinto kuhambisana ukuchama buhlungu futhi sokuzikhulula.
Ngakho, izimpawu samabhamuza ezithweni zangasese:
ukuqubuka ezithweni zangasese, izibunu, emathangeni, ephelezelwa ukulunywa futhi soreness;
ukuchama buhlungu futhi njalo (cystitis herpetic).
Kufanele kuqashelwe ukuthi i-main okubonakalisa isifo iyona ukuqubuka ukuthi ekuqaleni ifomu Bubbles. Base ziyaqhuma jikisa ukukhala izilonda. In amadoda, izilonda ivele ijwabu nenhloko umthondo, futhi abesifazane - kwi labia, perineum, ingquza.
herpes zangasese, izimpawu zazo lusebenze ngokugcwele indawo ngokuyinhloko ukutheleleka okuyisisekelo kuzibonakalisa izinsuku ezimbalwa emva kokutheleleka. recurrences Okwalandela lula. Izintaba-mlilo ziqhume mancane futhi sigijime.
Sitholakele isifo Kwenziwa ukuhlolwa udokotela wezifo zabesifazane, Urologist noma venereologist. Uma ungabaza kuqinisekiswa cwaningo. PCR Kwenziwa ukuhlwanyelwa noma osenyameni evela vesicles nezitho zangasese. Ngaphezu kwalokho, titer Igm futhi IgG amasosha igciwane egazini.
Lokhu kwenza kube nokwenzeka hhayi kuphela ukusungula Eqinisweni kwamagciwane nezifo, kodwa futhi ukuthi kusemthethweni yini eyisisekelo. Ungase futhi uthole elele igciwane noma iyasebenza.
Ukwelashwa lesi sifo Kwenziwa esebenzisa yokwelapha namagciwane. Ngokuvamile unikezwa aciclovir noma groprinozin. Futhi kabanzi interferon amalungiselelo. Acyclovir isetshenziswa ihlelwe ngokulandelana kwezihloko njengenhlangano amafutha, noma systemically. Umthamo futhi lwemithi zincike imvamisa nobukhali ngangibuye ngihluleke.
Kuzokusiza ukunciphisa indlela efanele yokuphila. Exacerbation kwenzeke amasosha omzimba aphansi. Ngakho-ke, kufanele ugweme ukucindezeleka, hypothermia, okweqile, ukuzivocavoca, ukuqeda imikhuba emibi, ukudla ngendlela efanele, udle amavithamini anele.
obhekene Ikakhulukazi kufanele basondele ukuhlela labesifazane abakhulelwe samabhamuza ezithweni zangasese. Njengoba exacerbation ngalesi sikhathi kungase kubangele ukutheleleka fetus. Ukushesha lokhu kwenzeka, izibikezelo edabukisayo. Ukwenza kusebenze igciwane trimeter zokugcina, ikakhulukazi ngaphambi kokuzalwa - izinkomba sesigaba cesarean.
Nokho, i-eyingozi yokukhulelwa iyona ukutheleleka okuyisisekelo. Ngakho-ke, abesifazane abangabhalisile igciwane herpes, kudingeka uqaphe kakhulu. Isiguli ngasinye ngubani ihlela ingane kufanele ibuyiselwe igazi smear ngaphambi kokukhulelwa futhi ngemva kokubamba ukukwenza zonke senyanga.
Ngakho, i-herpes zangasese, izimpawu zazo ziyabonakala ngaso sonke isikhathi, kuyinto ngokobulili abavamile izifo ezithathelana. Kuyingozi ngoba kungaba izinkinga sokukhulelwa futhi abangele kwezinso fetus.
Yini okufanele ibe namandla lapho ushukela ngokweqile egazini?
Hyperemia lomuntu: isimo semvelo noma isifo?
Toyota Carina: Ukucaciswa, ukumisa
Dzheyms Fenimor Kuper, "Pathfinder": Isifinyezo kanye main izinhlamvu
Ubude kwebhuloho yonkana Kerch Strait akukakabi ncamashi ezaziwayo. Umlando, zamanje nezesikhathi esizayo kwebhuloho yonkana Kerch Strait
Beading: umlando nesenzakalo